Mahery ny teny - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Fiainana miaraka amin'Andriamanitra > Teny manana fahefana
Tsy tadidiko intsony ny anaran'ilay sarimihetsika. Tsy tadidiko ny lalan'ny tantara na ny anaran'ireo mpisehatra. Fa tadidiko ny tranga iray. Ilay mahery fo dia nitsoaka avy amin'ny tobin'ny ady ary nisy ny miaramila nenjehin'ny tafika, nandositra nankany amin'ny tanàna akaiky iray.
Rehefa nitady toerana hiafenana izy, dia niditra tao amin'ny teatra be olona ary nahita toerana tao. Saingy tsy ela dia tonga saina fa niditra tao amin'ny teatra ny mpiambina ny fonja efatra na dimy ary nanomboka nosakanana ireo fivoahana. Nihazakazaka ny eritreriny. Inona no azony atao? Tsy nisy fomba hafa nandehanana ary fantany fa ho fantatra mora foana izy raha mandao ny teatra ny mpitsidika. Tampoka teo dia nisy hevitra tonga taminy. Nitsambikina tao amin'ny teatra antsasa-maizina izy ary niantsoantso hoe: «Afo! Fire! Afo! » Nikoropaka ny vahoaka ary nirohotra nankany amin'ny fivoahana. Noraisin'ny mahery fo ilay fotoana, nafangaro tamin'ny vahoaka, dia nandositra ireo mpiambina ary nanjavona tao anaty alina. Tadidiko fa ity zava-nitranga iray ity no antony iray lehibe: Manana hery ny teny. Tao anatin'ity trangan-javatra gaga ity dia nisy teny kely iray nampahatezitra ny olona maro ary nihazakazaka nanolotra ny ainy!
Ny Bokin’ny Ohabolana (18,21) dia mampianatra antsika fa manana hery hitondrana fiainana na fahafatesana ny teny. Mety handratra sy hamono ny hafanam-po ary hanakana ny olona ny teny tsy voafantina. Afaka manasitrana sy mampahery ary manome fanantenana ny teny voafidy tsara. Nandritra ny andro maizina indrindra tamin'ny 2. Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, dia nanome herim-po ho an'ny vahoaka sy namerina ny herin'ny vahoaka anglisy natao fahirano ireo teny voafantina tsara sy tsara tarehy nataon'i Winston Churchill. Voalaza fa nanetsika ny teny anglisy izy ary nandefa izany tany amin’ny ady. Toy izany ny herin'ny teny. Afaka manova fiainana ianao.
Izany dia tokony hahatonga antsika hiato kely sy hieritreritra. Raha manana hery toy izany ny tenintsika olombelona, ​​mainka fa ny tenin’Andriamanitra? Ny Taratasy ho an’ny Hebreo dia mampiseho amintsika fa “velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra” (Hebreo 4,12). Manana kalitao mavitrika izy io. Manana angovo izy io. Mahatonga ny zavatra hitranga izany. Manao zavatra tsy azon’olon-kafa atao izy io. Tsy mampahafantatra fotsiny fa manao zavatra. Rehefa nalain’i Satana fanahy tany an’efitra i Jesosy, dia fitaovam-piadiana iray ihany no nofidiny hiadiana sy hanoherana an’i Satana: “Voasoratra hoe; voasoratra izany; voasoratra hoe: » hoy Jesosy namaly - dia nandositra Satana! Mahery i Satana, nefa mbola mahery kokoa ny soratra masina.
Ny hery manova antsika
Tsy vitan’ny hoe manao zavatra fotsiny anefa ny tenin’Andriamanitra, fa manova antsika koa. Tsy natao ho fampahafantarana antsika ny Baiboly, fa ho an’ny fanovana antsika. Afaka manome vaovao antsika ny lahatsoratra vaovao. Afaka manentana antsika ny tantara. Afaka mampifaly antsika ny tononkalo. Ny Tenin’Andriamanitra mahery ihany anefa no afaka manova antsika. Rehefa voaray dia manomboka miasa ao anatintsika ny tenin’Andriamanitra ary lasa hery velona eo amin’ny fiainantsika. Manomboka miova ny fitondran-tenantsika ary mamoa isika (2. Timoty 3,15-17; 1. Petrus 2,2). Izany no herin’ny Tenin’Andriamanitra.
Mahagaga antsika ve izany? Tsy rehefa tafiditra isika 2. Timoty 3,16 vakio hoe: «Fa ny Soratra Masina rehetra dia avy amin’ny tsindrimandrin’Andriamanitra», (“Andriamanitra nifofofofo», izany no tena dikan’ny teny grika). Tsy tenin’olombelona fotsiny ireo teny ireo. Avy amin’Andriamanitra izy ireo. Izy ireo dia tenin’ilay Andriamanitra iray ihany izay namorona izao rehetra izao sy manohana ny zava-drehetra amin’ny Teniny mahery (Hebreo). 11,3; 1,3). Tsy mamela antsika ho irery amin’ny teniny anefa izy rehefa mivoaka sy manao zavatra hafa. Velona ny teniny!
“Tahaka ny voan-katsaka mitondra ala arivo ao anatiny, dia toy izany koa ny Tenin’Andriamanitra ao amin’ny pejin’ny Soratra Masina, toy ny voa rendremana ao anaty silo izay tsy miandry afa-tsy mpamafy mazoto hanaparitaka ny voa sy ny fo lonaka. mba handray azy” (Ilay Olona Ambonin’i Kristy: Fianarana ny Hebreo nataon’i Charles Swindol, p. 73).
Mbola miteny amin'ny alàlan'ny teny nolazaina izy
Aza diso ny famakiana ny Baiboly noho ny tsy maintsy ataonao na satria mety izany. Aza vakiana amin'ny fomba mekanika izany. Aza mamaky azy io satria mino izy ireo fa Tenin'Andriamanitra. Fa jereo kosa ny Baiboly ho Tenin'Andriamanitra izay itenenany azy ireo anio. Amin'ny teny hafa, mbola miteny amin'ny teniny izy. Ahoana no ahafahantsika manomana ny fontsika hanana vokatra hahazoana ny teny mahery?
Amin’ny alalan’ny fianarana Baiboly ombam-bavaka, mazava ho azy. Ao amin’ny Isaia 55,11 Izao no voalaza ao: "... mba ho toy izany koa ny teny aloaky ny vavako: tsy hiverina amiko foana izy, fa hanao izay sitrako ary hahomby amin'izay anirahako azy." John Stott dia mitantara ny tantaran'ny mpitory teny nandehandeha namakivaky ny vavahadin'ny fiarovana tao amin'ny seranam-piaramanidina iray. Talohan’ny fotoana nanaovana scan électronique tamin’izay dia nikoropaka tao anaty paosiny ilay mpiambina. Nahita baoritra mainty iray nisy ny Baibolin’ilay mpitory teny izy, ka te hahafantatra ny tao anatiny. "Inona no ao anatin'io boaty io?" nampiahiahy ny fanontaniany ary nahazo ny valiny nanaitra: "Dynamita!" (Eo anelanelan'ny tontolo roa: John Stott)
Tena famaritana tsara ny Tenin'Andriamanitra - hery, hery mipoaka - izay afaka "mipoaka" fahazarana taloha, mamotika ny finoana diso, mandiso fahafoizan-tena vaovao ary mamoaka angovo ampy hanasitranana ny fiainantsika. Moa ve tsy izany antony manosika ny famakiana ny Baiboly hovana?